အဖွားအိုသည် အိမ်တွင်းတစ်နေရာဆီသို့ ဦးတည်နေသည်။ အသက်က ၇၀ ကျော် ၈၀ ခန့် သူမကို ကြည့်ရသည် မှာ စက္ကူအရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုပင်။ လေတိုက်လျှင် လွင့်ပါသွားမလားထင်ရသည်။ သူမ၏လှုပ်ရှားမှုတွေက အင်မတန်မှ ဖြည်းညှင်းညင်သာ၏။ ခြေတစ်လှမ်းကိုသတိဖြင့် ကြွလှမ်းပြီး ပြန်ချ၊ နောက်တစ်လှမ်း လှမ်း ဖို့ကျန်ခြေတစ်ဖက်ကိုအားယူကာမတင်၊ လဲသွားမှာစိုးသဖြင့် နံရံကိုကိုင်ထားသောလက်ကလေးက အရေပြားဖုံး ထားသည့် အရိုးသွယ်သွယ်ကလေးမျှသာ။ အလင်းရောင်ကောင်းစွာမရသည့် အခန်းလေးသည် ညဖက်လျှောက်ရသည့် ခရီးလမ်းတစ်ခုလိုပင်။ မျက်လုံးတွေမှုန်နေသဖြင့် တစ်ခါတစ်ခါနံရံကိုသွားပြီး မျက်နှာမူမိ သည်။ သူမသွားချင်သည်မှာ ရေအိမ်ရှိရာသို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ သူမကိုကြည့်ပြီး ဒီနေ့အဖို့ လိုရာ ကိုမှ ရောက်နိုင်ပါဦးမလားဟု ပင့်သက်မောရင်း မိမိထိုင်နေသည့် ဧည့်ခန်းအတွင်း တီဗွီ ရှေ့မှာ ဂိမ်းထိုင်ကစားနေသည့် သူမ၏မြေးကလေးထံ အကြည့်ရောက်နေသည်။ အဖွားအိုက သူသွားချင်သည့်နေရာ ကို အကူအညီမတောင်းဘဲ သွားချင်သည်။ တောင်းလျှင်လည်း တီဗွီဂိမ်းထဲမှာ အာရုံဝင်စားနေသည့် သူ့မြေးက ကြားချင်မှကြားမည်။ ကြားလျှင်လည်း ``ဟာ ဘွားဘွားကြီးက အလုပ်ရှုပ်လိုက်တာ´´ ဟု ပြန်ပြော ကောင်းပြောမည်။ မိမိကိုယ်သာ အားကိုးရာအကောင်းဆုံးဟု လောကဓံကိုနောကျေနေသူပီပီ မှတ်ယူထားသည်ထင့်။ ဧည့်သည်ဖြစ်သည့် ကျွန်တော့်မှာ ဤအခြေအနေတွင် ထိုင်နေရကောင်းနိုးနိုး၊ အဖွားအားတွဲခေါ်၍လိုရာလိုက်ပို့ရကောင်းနိုးနိုး ဖြင့် ချီတုံချတုံဖြစ်နေစဉ်
``အမေရယ် အိမ်သာသွားချင်ရင် သမီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါလား။ မတော်တဆ လဲကျသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကဲ လာ လာ´´ ဟု ထမင်းချက်နေသည့် သူမ၏သမီးအကြီးမကတွဲခေါ်မှပဲ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်သက်သာရာ ရတော့သည်။
ထိုအိမ်မှအပြန် ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ တွေးစရာတွေ သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ လူဆိုသည်မှာ မွေးကတည်းက အိုရမည်၊ နာရမည်၊ သေရမည်ကို လူတိုင်းသိပါသည်။ အိုပြီဆိုသည်နှင့် တပြိုင်တည်း နာခြင်းသည်လည်းတွဲ၍ပါလာမည်။ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ် မပါနိုင်။ သားတွေမြေးတွေအတွက်၊ လူ့အသိုင်းဝိုင်းအတွက် လူပိုတစ်ယောက်ပမာ မိမိရဲ့နောက်ဆုံး အချိန်တွေကိုဖြုန်းတီးရပေတော့မည်။ တရားဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း သတိနိုးကြားသည့် အရွယ် မဟုတ်တော့။ သမာဓိတည်ဆောက်ဖို့မလွယ်ကူတော့။ ဟိုမေ့ သည်မေ့နှင့် မိမိစိတ်သည် ပစ္စုပ္ပန်လား၊ အတိတ်မှာလားဆိုသည်ကို ကောင်းကောင်းခွဲခြားနိုင်သည်မဟုတ်တော့။ ဒါကြောင့်လည်း အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဒီလိုအရွယ်တွေမှာ vegetables (အသက်ရှင်နေသော်လည်းမလှုပ်ရှားနိုင်တော့သူ) ဟု ၀မ်းနည်းခံစားတတ်ကြသည်။ ဟင်းရွက်ကစွန်းတွေဟုရည်ညွှန်းကြသည်ထင့်။ သည်အရွယ်မှာ အအိပ်အနေကလည်း နည်းလာပြီ။ လုပ်စရာအလုပ်လဲ သိပ်များများစားစားမရှိတော့ တစ်နေ့တာအတွက် သူတို့မှာ အချိန်တွေ ကြာလွန်းလှမည်ထင်သည်။ သည်အချိန်တွေမှာ သူတို့ ဘာတွေများ စဉ်းစားနေမလဲ။ အတိတ်ငယ်ဘ၀အချိန်တွေကို ပြန်သတိရနေမလား။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘ၀ကို ၀မ်းနည်းအားငယ်နေမလား။ ဖြစ်ဖြစ်သမျှကို တရားသဘောအတိုင်းပဲ မှတ်ယူနေမလား။ ကြင်နာတတ်သည့် နွေးထွေးသည့် မိသားစု အသိုင်းအ၀န်းတွင်တော့ သိပ်ပြီး အခက်အခဲရှိမည်မထင်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုခေတ်တွင် လူကိုင်းကိုယ်စီ အလုပ်သွားကြရ၊ ကိုယ်စီ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနှင့် ဆိုတော့ သူတို့လည်း ဂရုတစိုက် သိပ်လုပ်ပေးနိုင်ကြသည်မဟုတ်ချေ။ အိမ်စောင့်သာသာဘ၀နှင့် အိမ်မှာကျန်ခဲ့သည့် ကလေးတွေနှင့်သာ အဖော်ပြုရတတ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီလိုပင်။ အဘိုးအဘွားများကို အလေးအနက်မထားတတ်ခဲ့။ စကားခပ်များများ၊ ပစိပစပ်နိုင်တတ်သည့် နားညီးစရာလူကြီးများဟုသဘောထားခဲ့သည်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေက တရွေ့ရွေ့ကုန်လွန်ခဲ့။ ကိုယ်တိုင် လူလတ်ပိုင်းရောက်၍ ဇရာက ခန္ဓာကို လှမ်းသတိပေးလာတော့သည်။ ငယ်စဉ်က နာရီဝက် တစ်နာရီခန့် အသော့ပြေးနိုင်ခဲ့သည်ကို အခု ၁၅ မိနစ်ပင်မနည်း လေ့ကျင့်နေရပြီ။ ကိုယ်တိုင်လည်း သားသမီးရပြီဖြစ်၍ ငါ့မြေးတွေ တစ်နေ့မှာ ငါ့ကို ဒီလိုပဲ သဘောထားဦးမလားဟု တွေးမိသည်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်မှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်သည့် လူ့သဘာဝအတိုင်း ငါဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမည်လဲဟု သုံးသပ်မိသည်။ အိုမင်းမစွမ်းနိုင်ချိန်တွင်တော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ဒီသားမြေးမြစ်တွေကိုပဲ မှီခိုရမည်လား။ သူတို့တွေစိတ်ထဲ လူပိုတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်ချင်သည်မှာအမှန်ပင်။ မိသားစုသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေတတ်သည့် လူကြီးမိဘကို လေးစား တတ်သေးသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရသည့် ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ ကျေနပ်မိတာအမှန်ပင်။ အင်း အိုမင်းပြီး မစွမ်းတော့သည် အချိန်တစ်နေ့တော့ ရောက်ဦးမည်။ ရောက်ချင်မှလည်းရောက်ပေမည်။ ဒီကြားထဲ အရွယ်လတ်ပိုင်းဘ၀မှာ ဖြတ်ကနဲလဲ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
သို့သော် . . . အို. . . လာ . . .ရင်. . . . တော့ . . .
ဒီအတွေးဝင်မိတော့မှ အရွယ်ကြီးရင့်သူ အဖိုးအို၊ အဖွားအိုတွေကို ပို၍ ဂရုဏာသက်လာခဲ့တော့သည်။
Posted by နည်ရဲဇော် at 1:16 AM No comments: Links to this post
သည် အချိန် သည် ရက်
“ကြည်ရယ်…. ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားစားချင်တယ်” တဲ့ . . .
အို ဖခင် . . .
မျှော်နေမယ်. . .
“အောင်ဆန်း . . .”
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်အထိစောင့်ရမလဲ ?
အဖေ ကြားသိစေသား. . .
စတေးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀
ကြာခဲ့ပြီကော . . .
Posted by နည်ရဲဇော် at 7:29 PM No comments: Links to this post
လွမ်းမောဖွယ်ပန်းချီကား . . .။
စိတ်ကူးယဉ်မိတယ် . . .။
အချိန်တွေ ကုန်လွယ်စောလိုက်တာ . .။
ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသတဲ့ . . .။
သြော် . . အခုတော့လည်း
ဖျော့တော့မှေးမှိန်စွာ. . ..
၀င်လာခဲ့တယ်. . .။
Posted by နည်ရဲဇော် at 7:28 PM No comments: Links to this post
အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ . . .။
ယနေ့ထိ ငါ နားမလည်နိုင်သေးတာ
အပြန်မရှိသေးတာကလွဲရင် . . .
၀မ်းနည်းရတတ်တာကလွဲရင်ပေါ့ . . .။
Posted by နည်ရဲဇော် at 7:26 PM No comments: Links to this post
သဘာဝတရားကိုပစ်ထား . . .
ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပျံ့နှံ့သွားခဲ့ . . .
မင်း ... နောက်နေ့လာခဲ့ဦးတဲ့၊ . . .
Posted by နည်ရဲဇော် at 7:25 PM No comments: Links to this post
သေချာတာတစ်ခုရှိတယ်. . .
Posted by နည်ရဲဇော် at 4:11 AM No comments: Links to this post
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများ တစ်ခုခုအလေးအနက်ထားပြောချင်လျှင် ``ဘုရားစူးပါစေရဲ့။ မိုးကြိုးပစ်ပါစေရဲ့။´´ စသည်ဖြင့်ကျိန်ပြောတတ်ကြသည်။ မိုးကြိုးဆိုသည်မှာ အင်အားပြင်းထန်သော၊ လူကို သေစေနိုင်သော၊ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သောအရာဟုသိကြသည်။ သြောင်းတစ်ရာ့ရှစ်ကွက် ဂါထာလာ ``၀ရဇိတ်လက်နက် ဗြဟ္မာစက်၊ မိုးကြိုးလက်နက် သိကြားစက်´´ ဆိုတာကိုလည်း လူကြီးတွေ ရွတ်ဆိုတာကြားဖူးသည်။ အမိအဘ ကိုစော်ကားသူမိုးကြိုးပစ်တတ်တယ်ဟုလည်း လူကြီးတွေဆုံးမ တာနာယူခဲ့ဖူးသည်။ တစ်ချို့ဂမ္ဘီရလိုက်စားသည့် သူများကျတော့ မိုးကြိုးသွား ဆိုတာကိုသဲကြီးမဲကြီး လိုက်ရှာကြပြန်သည်။ မိုးကြိုးသွားရရင် ``ဘာကောင်းတယ်၊ သေနတ်ပီးတယ်၊ မီး မကူးဘူး´´ စသည်ဖြင့်ယုံတမ်းစကားတွေငယ်ငယ်က ကြားခဲ့ဖူးသည်။ အခုအထိတော့ မိုးကြိုးသွားဆိုသည်မှာ ဘာမှန်းမသိ။ မိုးကြိုးသွား ရသွားသည့်သူကိုလဲ မမြင်ဘူးသေး။ မိုးဦးကျလေဦးကျ တ၀ုန်းဝုန်းမိုးချိန်းသံနှင့်အတူ ၀င်းလက်တောက်ပသွားသည့် အလင်းတန်းကိုကြည့်ပြီးငယ်ငယ်က တအံ့တသြနှင့် ကောင်းကင်ပေါ်က ဘယ်သူဓါတ်မီးနှင့် လှမ်းလှမ်းထိုးသလဲဟု ကလေးဘ၀က အဖေ့ကိုမေးဖူးသည်။ အဖေကတော့ ခပ်လွယ်လွယ်ပင် ကောင်းကင်ပေါ်က သိကြားမင်းကြီးက မိဘစကားနားမထောင်သည့်သူများကို မိုးကြိုးလက်နက်နှင့်လှမ်းဆုံးမကြောင်းပြောတတ်သည်။ ဒီလိုနဲ့အသက်တွေကြီးလာတော့ မိုးကြိုးနဲ့ယဉ်ပါးလာ ကြသည်။ ငယ်ငယ်ကလိုတော့အကြောက်မကြီးတော့။ ဒါပေမယ့် မကြာခဏ ဂျာနယ်တွေမှာ မိုးကြိုးအပစ်ခံရ၍ သေဆုံးသောသတင်းများမကြာခဏတွေ့လာတော့ မိုးကြိုးအကြောင်းပြန်တွေးလာမိသည်။ မိုးကြိုးဆိုတာဘာလဲ။ မိုးကြိုးဘာလို့ပစ်တာလဲ။ မိုးကြိုးပစ်လျှင် ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ စသည်ဖြင့် သိပ္ပံပညာရှုထောင့် အမြင်တွေကိုသိချင်လာမိတော့သည်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ လူသားတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုရှောင်လွှဲနိုင်စေချင်ပါသည်။
မိုးကြိုးဆိုသည်မှာ တိမ်တိုက်တစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်စေ၊ တိမ်တိုက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် တိမ်တိုက်မှ မြေပြင်ဆီသို့ ဖြစ်စေ လျှပ်စီးထုတ်လွှတ်မှုပုံစံတစ်မျိုးဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် တိမ်တိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ် အဖိုဓါတ်နဲ့ အမဓါတ်တို့ ခွဲထွက်ရာမှ ဖြစ်လာတာပါတဲ့။
Florida thunderstorm in Ponte Verde Beach, Florida, United States. (Photo credit: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/db/LightningFL.jpg/275px-LightningFL.jpg)
မိုးကြိုးဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုရှင်းပြတဲ့ သီအိုရီနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ပထမအယူအဆကတော့ cosmic particles (ကျွန်တော်လည်းဘာသာမပြန်တတ်ဘူး။) တွေနဲ့ လေထုထဲမှာရှိတဲ့ အမှုန်တွေ ပွတ်တိုက် ကြိတ်မိရာက ၄င်းအမှုန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ အီလက်ထရွန် (လျှပ်စစ်အမဓါတ်)တွေ လွတ်ထွက်သွားပြီး လျှပ်စစ် အဖိုဓါတ်၊ အမဓါတ်တွေဟာ တိမ်တိုက်တွေရဲ့ထိပ်နဲ့အောက်ခြေမှာတကွဲတပြားစီဖြစ်သွားတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်ပြိုကွဲ မှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒုတိယအယူအဆကတော့ ရေခဲမှုန်ကလေးတွေ နဲ့ မိုးပေါက်လေးများ တိမ်တိုက်အတွင်း တိုက်မိရာမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်ပြိုကွဲမှုဖြစ်လာပါသတဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးမှာ တိမ်တိုက်အောက်နားမှာရှိနေတဲ့ လျှပ်စစ်မဓါတ်တွေဟာမြေပြင်ဆီသို့ ပြန့်ကားလာသလို ဆွဲဆောင်ခံရတဲ့ အဖိုဓါတ်တစ်ချို့ဟာလဲ မြေမျက်နှာပြင်ရှိရာ ဆင်းလာပါတယ်။ ဒီတော့ မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေထံမှ လျှပ်စစ်အဖိုဓါတ် ဟာ ဆင်းလာတဲ့ အမ ဓါတ်ကိုတွေ့ဖို့ ကြိုးစားပမ်းစားတက်သွားတယ်ပေါ့။ ၄င်းဓါတ်နှစ်ခုဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အပူထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်လာပြီး(ဘယ်လောက်တောင်ပူသလဲဆိုတော့ နေမျက်နှာပြင်ရဲ့ ၄ ဆ အထိတောင်ပူနိုင်သတဲ့) ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းအဆင့်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မိုးကြိုးဟာ များသောအားဖြင့် မုန်တိုင်းအစနှင့်အဆုံးပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှ မိုးကြိုးအရှည်ဟာ တိမ်တိုက်ကနေမြေပြင်အထိ ၂ မိုင်မှ ၁၀ မိုင်ခန့်ရှည်လျားပါတယ်။ မိုးကြိုးရဲ့အပူချိန်ဟာ အမြင့်ဆုံး 50,000 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် အထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မိုးကြိုးအပစ်ခံရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ မီးသွေးတုံးဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ (မိုးကြိုးသွားရှာချင်တဲ့ ဆရာတွေပြောတာ ဒီမီးသွေးတုံးတွေပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့)။ ကမ္ဘာအနှံ့ နှစ်စဉ်မိုးကြိုးပစ်၊လျှပ်စီးလက်မှု အကြိမ်ပေါင်း သန်း ၁၄၀၀ ခန့်ရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့တည်းမှာပင် 8,640,000 ကြိမ်ခန့်၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် အကြိမ် ၁၀၀ ခန့် ပစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က မိုးကြိုးဆိုလျှင် မိုးခြိမ်းသံကိုကြောက်ကြတာများသည်။ တကယ့် လျှပ်စီး ကိုကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိကြ။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် တွေဆိုတာကလဲ လူကြီးသူမတွေအပြောစကား၊ လူပြောသူပြောနှင့်မှတ်သားမိကြတာတွေပဲရှိသည်။ တကယ့်လက်တွေ့ ကျသည့်နည်းလမ်းတွေ မသိသည့်အတွက် အမေရိကန်လိုနိုင်ငံများမှာပင် တစ်နှစ်လျှင် လူပေါင်း 200 ယောက်ခန့် မိုးကြိုးပစ်၍သေဆုံးကြပြီး ၇၅၀ ခန့် အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရနေကြသည်။ အပစ်ခံရသည့်လူ ငါးဦးတစ်တစ်ဦး(၂၀ %)နှုန်းသေဆုံးသည်။ ကျန် ၇၀ % က နာတာရှည်ဝေဒနာ သည်တွေဖြစ်ကုန် သည်။ လေမုန်တိုင်းတွေ လေဆင်နှာမောင်းတွေထက် မိုးကြိုးပစ်၍သေသည့်ဦးရေကပိုများသည်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍ ဘယ်လောက်သေဆုံးသလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လဲမသိပေ။ စာရင်းဇယားတွေ အတိအကျရှိ/မရှိ ပင်မသိပါ။ သေဆုံးသည့်သူများကိုကြည့်ပါက ကလေးငယ်များနှင့် လူရွယ်လူလတ်ပိုင်း ၃၅ နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဒါကလဲသဘာဝကျပါသည်။ ကလေးတွေဆိုတော့ ဘာသာဘာဝ မိုးရွာရင်မိုးရေချိုးချင်တာပေါ့။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကွင်းပြင်ထဲ ဘောလုံး ကန်ရတာလောက်ပျော်စရာကောင်းတာမရှိ။ ကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်က ဒီလိုဆော့ကစားခဲ့တာပဲ။ နဲနဲလေးလျှပ်စီးလက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကွင်းဘေးက သရက်ပင်အောက် ပြေးထိုင်တော့တာပဲ။ အဲ၊ နှစ်ဆယ်ကျော် သုံးဆယ်စွန်းလာတဲ့အရွယ်ရောက်တော့ အရင်လို ဘောလုံးကန်ဖို့အချိန်လဲမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ သူများတွေလို ဂေါက်ကွင်းထဲ စတိုင်နဲ့ ဂေါက်ဖ်ရိုက်ဖို့မပြောနဲ့ ဂေါက်ဖ်ကွင်းနားတောင်မကပ်နိုင်တဲ့ဘ၀ဆိုတော့ မိုးအေးအေးမှာ အိမ်တွင်းအောင်းနေရတော့ မိုးကြိုးဒဏ် လွတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ ဂေါက်ဖ်ရိုက်နိုင်သူ ဆရာများတော့ မိုးကြိုးပစ်ခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ချေပိုများတာပေါ့။
မိုးကြိုးဒဏ်ကလွတ်အောင် ထန်းလက်နဲ့ကာလို့မရဘူးဆိုတာတော့ စာထဲစကားထဲပါပြီးသားမို့ မြန်မာတိုင်းသဘောပေါက်ပြီးသားပါ။ မိုးကြိုးဒဏ်ကို နည်းနိုင်သမျှနည်းနည်းခံရအောင်၊ လွတ်နိုင်သမျှလွတ်အောင်ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကတော့ အောက်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေဒီယိုက မိုးလေ၀သတင်းကြေညာတဲ့အခါ မိုးကြိုးပစ်နိုင်သည်ဟုကြေညာချက်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
ကိုယ်က လှေလှော်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေကူးနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးရွာပြီ၊ မိုးခြိမ်းပြီဆိုတာနဲ့ ကမ်းပေါ်တက်ပြီး လုံခြုံတဲ့နေရာရှာပါ။ ရေနဲ့ဝေးဝေးမှာနေပါ။ မိုးကြိုးပစ်တဲ့အခါ လျှပ်စီးဓါတ်က ရေကတဆင့် ကိုယ့်ဆီရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်သမျှ လေးဘက်လေးတန် အကာအကွယ်ရှိတဲ့၊ ခိုင်ခံ့တဲ့အဆောက်အဦကိုရှာ၍ခိုပါ။ ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ ``လယ်စောင့်တဲလေးခြေတံရှည်´´ လိုဟာမျိုးကတော့မသင့်တော်ပါဘူး။ လယ်ကွင်းထဲကအကောင်းဆုံးပစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် လေပြင်းတိုက်ရင်လွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
နားခိုစရာ အဆောက်အဦးခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့မရှိလျှင် အနီးအနားရှိ ကားထဲမှာ မှန်တွေအလုံပိတ်၍နေပါ။ (ကားမစီးနိုင်သူသူများ ဘတ်စ်ကားလည်းအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) ကားခေါင်မိုးကသတ္တုက မိုးကြိုးလျှပ်စီးကို မြေကြီးထဲ လမ်းလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတ္တုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့ထိမနေပါနဲ့။) အကယ်၍ကားကို မိုးကြိုးတိုက်ရိုက်မှန်လျှင်တောင်မှ ဒဏ်ရာရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကွင်းပြင်မှာ ရှိနေတာထက်စာရင်တော့ပိုပြီးအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။
တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အခါ အပင်ပုလေးတွေအုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာပုန်းခိုပါ။ ကွင်းပြင်ထဲက သစ်ပင်အမြင့်ကြီးအောက်မှာဘယ်တော့မှ မခိုပါနဲ့။ ရေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရှောင်ပါ။
မိုးကြိုးရဲ့သဘောက အမြင့်ဆုံးအရာကို ပစ်ချတဲ့အတွက် မျှော်စင်လိုမျိုး၊ သစ်ပင်မြင့်မြင့်တွေ၊ ဓါတ်တိုင်တွေ၊ တယ်လီဖုန်းကြိုးတိုင်တွေ၊ စတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုဝေးဝေးမှရှောင်ပါ။ မိုးကြိုးပစ်တာလွတ်ဦးတော့ သစ်ပင်ပိ၊ ဓါတ်လိုက် ခံရနိုင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ ကွင်းပြင်ထဲရောက်လို့ မိုးကြိုးပစ်တော့မယ်ဆိုရင် မြေပြင်မှာဝပ်နေရမယ်လို့ကြားဖူးနေကျဖြစ်မှာပါ။ ဒါမနည်းလမ်းမှန်ဘူးလို့ ပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။မြေပြင်မှာဝပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ကပစ်မှတ်ပိုကြီးသွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ မြေပြင်မှာဒူးခေါင်းနှစ်လုံးကိုကွေးထိုင်ပြီးလက်နှစ်ဘက်နှင့်ပိုက်၊ ခေါင်းကို ဒူးခေါင်းဆီငုံ့ကပ်ထားကာ ပစ်မှတ် သေးနိုင်သမျှသေးသွားအောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ကမိုးကြိုးစက်ကွင်းထဲရောက်နေရင် ဆံပင်တွေထောင်လာတာ ကိုယ့်ဆီမိုးကြိုးရောက်လာမယ့်ရှေ့ပြေးသတိပေးချက်ပါ။ သတ္တုပစ္စည်းတွေနဲ့လူ့အသားနဲ့ထိတွေ့မထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သတ္တုဟာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီသဘောပါပဲ။ မိုးခြိမ်းသံတွေကြားနေရလျှင် တယ်လီဖုန်း(မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း) မပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဆောက်အဦတစ်လုံးကို မိုးကြိုးပစ်လိုက်တဲ့အခါ လျှပ်စစ်ဓါတ်တွေဟာ အဲဒီအဆောက်အဦထဲရှိ ၀ါယာကြိုးတွေကတဆင့် မြေကြီးထဲ ၀င်ရောက်သွားပါတယ်။ စီးဝင်စရာကမြေကြီးမဟုတ်ဘဲ တီဗွီတို့၊ ရေခဲသေတ္တာတို့ ဖြစ်နေရင် လောင်ကုန်တော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ပလပ်ဖြုတ်ထားသင့်ပါတယ်။
မိုးကြိုးပစ်တဲ့အခါ တစ်ကြိမ်ထဲပစ်တာမဟုတ်ဘဲ နောက်ဆက်တွဲတွေလဲလာတတ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခါ ကိုယ်နဲ့လွဲသွားလို့ လွတ်ပြီထင်ပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေပါနဲ့။ မိုးကြိုးသံကြားပြီးအနည်းဆုံး ၅ မိနစ်ခန့် စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ပုံမှန်အလုပ်တွေပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကဲဒါတွေကတော့ မိုးကြိုးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိသင့်သိထိုက်တဲ့အချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ အများစုဟာ တောသူတောင်သား ကွင်းပြင်မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေ ကြရသူတွေဖြစ်လို့ မိုးကြိုးဒဏ်ခံရနိုင်ချေအများဆုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မြို့နေလူထုဆိုလျှင်လည်း အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းခွင်က ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားတွေ လည်း သတိထားစရာပေါ့။ အစဉ်အလာ ရိုးရာယုံကြည်မှုတွေကို လက်ခံတာကန့်ကွက်စရာမရှိပေမယ့် သိပ္ပံနည်းကျ အသိအမြင်တွေ ပြည်သူလူထုအကြားမှာ ပိုမိုပျံ့နှံ့လာလျှင် ပို၍အကျိုးရှိမှာ မျှော်ကိုး၍ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာရေးသူလည်း မိုးလေ၀သ သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရေးသားနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တာကို အင်တာနက်မှာ ရှာရင်းနဲ့ သူများတွေကိုလည်း သိစေချင်၍ ရေးသားအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါ website များမှ အချက်အလက်များရယူပါတယ်။
Posted by နည်ရဲဇော် at 1:31 AM No comments: Links to this post
အခုဘယ်ရောက်နေပြီလဲ. . .
ဘာလို့မရှိရတာလဲ . . .
Posted by နည်ရဲဇော် at 9:09 PM No comments: Links to this post
Posted by နည်ရဲဇော် at 8:35 PM No comments: Links to this post
သင်နောက်ကျခဲ့ပြီ. . .။
ထိုစဉ်ခဏ. . .
အို . . . သီတာနှမ
သင့်အလှည့်ကျပြီ။ . . .။
Posted by နည်ရဲဇော် at 8:34 PM No comments: Links to this post
Posted by နည်ရဲဇော် at 8:23 PM No comments: Links to this post
ဘ၀ ၀မ်းစာ ခုန်ဆွရှာသည်
အို . . ငါသည် လူသား . . .
ခြေ၊ လက်၊ နှလုံး၊ စုံသည့်အင်္ဂါ
ရှေ့ကိုတိုးဘိ နာဂါတ်ဆီသို့ . . .
ငါသည်တစ်ဖန် အောင်ပွဲခံအံ့ . .
Posted by နည်ရဲဇော် at 8:09 PM No comments: Links to this post
သူ့သိက္ခာတွေဖြစ်လို့ပေါ့ . . .။
“အဲဒါက ဘ၀” . . .တဲ့။
(. . . ရယ်သံများ . . . )
Posted by နည်ရဲဇော် at 8:07 PM No comments: Links to this post
တစ်နေ့နေ့ပေါ့ . . .
တစ်ကနေ “စ” ကြမယ်။
နောက်ဆုံးအချိန်အထိ . . ။
ကိုယ်ယုံကြည်ခဲ့တာတွေ . . . ။
မင်း နာ မည် ကို
ထွင်းထုခွင့်ရသွားတာပေါ့ . . .။
Posted by နည်ရဲဇော် at 6:48 PM No comments: Links to this post